Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0413 lah
Lesona 04 : Andriamanitry ny firenena rehetra (Amôsa)
20 - 26 Apr. 2013
Alahady 21 Apr.
Vakio ny Amô. 1 sy 2. Nahoana no mampitandrina mialoha Andriamanitra fa hisy famaizana ho avy?
Ahitana faminaniana fito ho an’ireo firenena manodidina ny Isiraely, ary koa faminaniana iray ho an’ny Isiraely, ao amin’ireo toko roa voalohany amin’ny bokin’i Amôsa. Tsy amin’ny maha-fahavalon’ny Isiraely azy no nitsarana ireo firenena manodidina ireo, fa noho ny fandikàny ny fitsipika an-kapobeny mikasika ny maha-olombelona mihitsy. Zavatra anankiroa no misongadina ao anatin’ny fanamelohan’i Amôsa: Ny tsy fisian’ny fahatokiana sy ny tsy fisian’ny fangorahana.
I Tiro, ohatra, dia tanànam-barotra iray nanana ny maha-izy azy indrindra teo amoron’ny ranomasina Mediterane, teo avaratry ny Isiraely. Noho ny mandany sarotra idirana an-keriny, dia nirehareha tamin’ny fiadanany tokoa io tanàna io. Ankoatra izany, dia nanao fifanekena tamin’ireo firenena maro nanodidina azy, toa an’i Filistia, ohatra, ireo mpanapaka tao Tiro, ho fiarovana ny tanàna. Nikambana tamin’ny Isiraely tamin’ny alalan’ny “fifanekem-pirahalahiana” io tanàna io nandritra ny nanjakan’i Davida sy i Sôlômôna (1 Mpanj. 5:1, 11), eny, tamin’ny fotoana nanjakan’i Ahaba koa aza (1 Mpanj. 16:30,31). Tsy mahagaga àry raha niantso an’i Sôlômôna mpanjaka hoe “ry rahalahiko,” i Hirama mpanjakan’i Tiro, raha vakina ny ao amin’ny 1 Mpanj. 9:13.
Nandika ny “fifanekem-pirahalahiana” anefa ny vahoakan’i Tiro. Tsy noho izy nakà ny babo no nanamelohana an’i Tiro fa noho izy nanolotra izany babo izany ho eo an-tanan’ny Edômita, fahavalon’ny Isiraely. Vokatr’izany dia tompon’antoka ny amin’ny habibiana nanjo ireo babo teo an-tanan’ny fahavalony ireo i Tiro. Raha ny fomba fijerin’Andriamanitra, dia meloka tahaka izay nanao heloka bevava ihany koa ny olona manampy sy manohana ny olona manao izany heloka bevava izany.
Koa satria Andriamanitra no manjaka amin’ny zava-drehetra, dia Izy no mihazona ny fiafaran’izao tontolo rehetra izao eo an-tanany. Mihoatra lavitra ireo sisin-tanin’ny Isiraely ny zava-kendreny sy ny fikarakarany. Ny Andriamanitry ny Isiraely no Andriamanitry ny firenena rehetra; manahiran-tsaina Azy avokoa ny tantaran’ny taranak’olombelona rehetra. Izy no Andriamanitra Mpahary Izay manome ny aina ho an’ny rehetra ka noho izany dia tompon’andrakitra eo anatrehany avokoa izy ireo.
Iza amintsika re no tsy mihoron-koditra eo anatrehan’ny tsy fahamarinana lehibe mpiseho eo anatrehantsika e? Raha tsy misy Andriamanitra, inona no fanantenana ananantsika ny amin’ny tokony hampiharana ny fahamarinana? Midika inona ho anao ireo teny fikasana hita manerana ny Baiboly mikasika ny fitondran’ Andriamanitra fahamarinana sy fitsarana eo amin’izao tontolo izao? Ahoana no fomba ianarantsika mifikitra amin’izany teny fikasana izany eo anivon’ny tsy fahamarinana hitantsika manjaka amin’izao fotoana izao?